आसाम डाउटाउन युनिभर्सिटिको आठौं दिक्षान्त समारोह
सेतोपत्र डेस्क बिहिबार, भदौ ३१, २०७८
झापा, भदौ ३१ । भारतको गुवाहाटीस्थीत आसाम डाउनटाउन यूनिभर्सिटी (एडीटीयू) को आठौं दीक्षान्त समारोह बिषेश कार्यक्रम गरेर सम्पन्न भएको छ । दिक्षान्त समारोह करीब एक हजारलाई विभिन्न डिग्री प्रदान गर्दै बुधवार भब्यतापूर्वक सम्पन्न भएको युनिभर्सिटिले जनाएको छ ।
समारोहमा यसवर्ष ९४४ जना शोधार्थीमध्ये ७२४ जनालाई स्नातक, २१३ जनालाई स्नातकोत्तर र ७ जनालाई विद्यावारिधि उपाधि प्रदान गरिएको यूनिभर्सिटीका नेपाल प्रतिनिधि शंकर भट्टराईले जानकारी दिनु भयो ।
पूर्वोत्तर भारतको सबैभन्दा उत्कृष्ट विश्वविद्यालयको रुपमा परिचित एडीटीयूमा २५० भन्दा बढी फ्याकल्टीमा अध्ययन हुने गरेको भट्टराईले बताउनु भयो ।
भट्टराईका अनुसार दीक्षान्त समारोहको प्रमुख अतिथि आसामका राज्यपाल जगदीश मुखी हुनुहुन्थ्यो भने यूनिभर्सिटीका चान्सलर डा. एन.एन. दत्त, आसामका पूर्व मुख्यमन्त्री प्रफुल्लकुमार महन्त, प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता पद्मा हजारिका, कुलपति डा. एनसी तालुकदार लगायतले कार्यक्रमलाई सम्बोधन गरेका थिए । सो अवसरमा डीन डा. बन्दना दत्ताले सात जना पीएचडी उपाधिप्राप्त शोधार्थीलाई प्रमाणपत्र प्रदान गर्नु भएको थियो ।
त्यहीकारण त्यहाँ पढ्नका लागि धेरै नेपालीहरु जाने गरेका छन । युनिभर्सिटीका नेपाल प्रमुख भट्टराईले कोभिड १९ को महामारीको अवधिमा पनि युनिभर्सिटीको कुनै पनि फ्याकल्टीको पढाई र परीक्षा रोकिएन ।
युनिभर्सिटीले कोरोना आउनुभन्दा धेरै पहिलेदेखि नै आफ्नो अध्यापन विधिलाई अनलाइन प्रविधियुक्त बनाइसकेको भट्टराईले जानकारी दिनु भयो । विश्वका अधिकांश युनिभर्सिटीका परीक्षा कोरोनाले प्रभावित भए तापनि त्यहाँका परीक्षा रोकिएनन ।
प्रकाशित मिति: बिहिबार, भदौ ३१, २०७८, १६:१३:००